Fahasamihafana eo amin'ny ronono fanosotra feno sy ronono manontolo | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny ronono fanosotra feno sy ronono manontolo | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Life Style / Food / fisotro / Difference Eo Amin'ny Full Cream dronono sy manontolo Milk
Tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny ronono feno ronono sy ronono manontolo. Ny rononon-dronono feno dia ilay teny ampiasaina hivarotana ronono izay manana tavy mitovy amin'ny ronono manontolo.
Ny ronono iray manontolo dia manankarena otrikaina misy tsiro malefaka sy endrika ary manome zava-pisotro misy kaloria kely miaraka amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana maro. Izy io koa dia fitambaran-tsakafo mahery vaika toy ny calcium , phosphore, potassium, proteinina ary vitamina K2. Noho izany, ny fihinanana ronono dia manakana ny aretin-taolana toy ny osteoporose .
2. Inona ny ronono feno crème
3. Inona ny ronono manontolo
4. Milkira feno ronono vs ronono iray manontolo
Inona ny ronono feno crème?
Ny ronono feno ronono dia ronono izay tsy nesorina ny crème sy ny matavy. Tena mahavelona izy io ary manome ny otrikaina rehetra ilaina amin'ny fampandrosoana ny vatana. Ity tsiranoka mamy ity dia avy amin'ny fihary mammary an'ny biby mampinono. Fantatra fa olona enina tapitrisa tapitrisa eran-tany no misotro ronono. Misy gliosida 4.7g eo ho eo, tavy 3,9g, proteinina 3,3g ary totalin'ny 66,9 kcal, ao anaty vera misy ronono crème feno 100ml. Raha mihinana antonony dia tsy mampanan-danja ny mpanjifa ny misotro ronono feno ronono. Ny fomba tsara indrindra ahazoana ireo vitamina tena ilaina amin'ny vatantsika dia amin'ny fisotroana ronono feno ronono satria simba ny ankamaroan'ny otrikaina rehefa mahandro.
Ny zazakely mitaiza, aorian'ny nahaterahany, dia manentana ny fihary mammary, ary vokatr'izany dia mamokatra antibodies antsoina hoe colostrum izy ireo. Ilaina ho azy ireo ny miady amin'ny aretina voalohany. Izy io dia manana lactose izay manampy amin'ny fahasalaman'ny taolana sy ny nify amin'ny famokarana calcium. Rehefa mihantitra ny olona dia mihena ny lactase ao amin'ny vatana ary avy eo lasa tsy mahazaka lactose izy ireo satria ilaina ny lactase handevona lactose. Ny fivezivezena any ivelany dia ny famantarana an'io. Mba hanodinana kalsioma ao amin'ny rafi-pandevonan-kanina dia mila vitamina D ny vatana ary amin'ny alàlan'ny fihinanana ronono crème feno dia mora azon'ny olona izany. Noho izany dia asaina mihinana ronono fanosotra roa na telo vera isan'andro mba handraisana ireo otrikaina ilaina amin'ny vatantsika. Izy io koa dia tsara ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 70 taona, indrindra raha marefo izy ireo, sitrana amin'ny fandidiana na tsy ampy lanja. Izy ireo dia afaka mihinana proteinina avo, sakafo matanjaka amin'ny angovo, puding-bary, mpikarakara ary zava-pisotro sôkôla mafana vita amin'ny ronono crème feno. Ny ronono vita amin'ny crème dia feno loharanom-proteinina, calcium, vitamina A, vitamina D, vitamina B2, vitamina B12 ary phosforus.
Inona ny ronono manontolo?
Ny ronono iray manontolo dia anarana iray hafa amin'ny ronono fanosotra feno. Ronono izay tsy nesorina ny tavy. Ny ronono iray manontolo dia ronono amin'ny endriny tsy misy fangarony. Manana 87% ny rano ao aminy, izay akora fototra hafa ao aminy ankoatry ny tavy. Ho an'ny olona tsy mahazaka lactose , vegan na vegetarian, dia misy mpisolo ronono iray manontolo toy ny ronono soja, ronono amandy ary ronono vary.
Inona ny fahasamihafana misy amin'ny ronono feno ronono sy ronono manontolo?
Tsy misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny ronono feno ronono sy ronono manontolo. Ny ronono feno crème dia anarana ampiasaina rehefa mivarotra ronono izay ny tavy matavy dia mitovy amin'ny ronono iray manontolo.
Famintinana - Ronono feno menaka feno ronono iray manontolo
Ny ronono feno crème dia anarana ampiasain'ny mpivarotra rehefa mivarotra ronono manontolo. Noho izany, tsy misy mahasamihafa ny ronono feno krema sy ny ronono manontolo. Misy vitamina, mineraly ary otrikaina maro hafa izay azontsika azo avy amin'ny ronono manontolo. Izy ireo dia tsara ho an'ny ankizy, ny reny mitaiza ary ny olon-dehibe koa. Izany dia tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe mihoatra ny 70 taona sy olona tsy salama satria manome angovo sy otrikaina hafa ilaina aminy.
1. Ferdman, Roberto. " Ny fahamarinana rehetra momba ny 'ronono manontolo .'" The Washington Post, WP Company, 26 apr. 2019.
2. " Inona avy no soa azo avy amin'ny fisotroana ronono feno crème ." Delta Food Industries FZC, 22 Jolay 2019.
1. " Fisotro-dronono-vera vaovao-mahasalama-518067 " (CC0) via Pixabay
Fahasamihafana eo amin'ny Diet Coke sy Coke Zero Fahasamihafana eo amin'ny coke mahazatra sy ny sakafon'ny sakafo Fahasamihafana eo amin'i Ale sy i Lager Fahasamihafana eo amin'ny kafe misy kafeinina sy kafe Fahasamihafana eo amin'ny ranom-boasarimakirana sy ny voasarimakirana
Fahasamihafana eo amin'ny Step Brother sy Half Brother
Fahasamihafana amin'ny fifaninanana sy ny fifaninanana
Fahasamihafana eo amin'ny mozika Jazz sy Rock
Fahasamihafana eo amin'ny Motorola Atrix 4G sy Atrix 2
Fahasamihafana eo amin'ny lahatra sy ny lahatra